Welcome to Thang No - Internet Evangelism
Welcome to Thang No – Internet Evangelism
Myanmar Christian Songs
ယဟေောဝါ နာမတျော-၁၆ မြိုး
Jehovah ၏အနကျအဓိပ်ပါယျမှာ ထာဝရဖွဈသညျ။ (က၊၂၁း၃၃၊ ထှ၊၃း၁၃-၁၄၊ ၆း၃၊ဆာလံ၊ ၈၃း၁၈၊ ဟရှော၊ ၁၂း၂။ ၂၆း၎) 1. Jehovah Elohim-the Eternal Creator ထာဝရဖနျဆငျးရှငျ အကွိမျ(၁၀၀)မကဖျောပွထားပါသညျ။(က၊၂း၎-၂၅ ) 2. Jehovah Adonai – the Lord our Sovereign; Master Jehovah တနျခိုးအာဏာတျောအတိုငျးမသိ၊ကွီးကဲထှဋျမွတျတျောမူသော (က၊ ၁၅း၂၊၈ ) 3.Jehovah Jireh –the Lord will see or Provide ကွီးကွပျကွညျ့ရှုသူ၊ (က၊ ၂၂း၈-၁၄။ ရော၊၈း၃၂ ) 4. Jehovah Nissi -the Lord our Banner အောငျမွငျခွငျး၊(ထှ၊ ၁ရး၁၅ ) …
Continue reading “ယဟေောဝါ နာမတျော-၁၆ မြိုး”
“သစ်တောအစ မျိုးစေ့က” (The forest in the seed) ဟူသောစကားကို သင်ကြားဘူးကောင်း ကြားဘူးပါမည်။ မျိုးစေ့တစ်စေ့မှ စ၍ သစ်တောတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဆိုလျှင် သင်ယခု မျိုးစေ့ချသင့်ပါသည်။ သစ်တော၏တန်ဖိုးနှင့် မျိုးစေ့၏တန်ဖိုးမတူပေ။ သစ်တောက ပို၍အဖိုးတန်ပေသည်။ သို့သော် မျိုးစေ့တစ်စေ့မှ စရပါမည်။ မျိုးစေ့တစ်စေ့က မည်မျှတန်ဖိုးမရှိသော်လည်း အလေးမထား၍ မရပါ။ မျိုးစေ့သည် မပျက်လျှင် တစ်စေ့တည်းနေ၏။ ပျက်လျှင်မူ အဆတစ်ရာမက ပွါးများစေနိုင်ပါသည်။ ၀ိညာဉ်ရေးရာတွင်လည်း ထိုနည်းတူ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မျိုးစေ့ကြဲရပါမည်။ မျိုးကြဲခြင်းဆိုသည်ကား စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရင်နှီးမြုပ်နှံခြင်း၊ ပေးဆပ်ခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ပူဇော်ခြင်း၊ စသည်ဖြင့် ဖော်ပြလိုသည်။ သင်ယနေ့ခံစားရခြင်းသည် ယခင်ကစိုက်ပျိုးခဲ့သောအရာများ သီးပွင့်လာ၍ဖြစ်သည်။ ယနေ့စိုက်ပျိုးလျှင် နောင်အခါ စားသုံးရမည် ဟုမြော်လင့်နိုင် သည်။ သင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါ၏လော။ စိုက်ပျိုးသူတိုင်းက အသီးကိုစားဖို့မျှော်လင့်၍သာစိုက်ပျိုးကြသည်။ စားရမည်ဟု …
Continue reading “ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့”
ခရဈယာနျသာသနာသမိုငျးအပျေါ ယဘေုံယြ သုံးသပျခကျြ
နိဒါနျး ခရဈယာနျသာသနာပွုပုံစံနှငျ့ခရဈယာနျသာသနာအပျေါ ခံယူခကျြသညျ ခတျေအဆကျဆကျက ပွောငျးလဲလာသော ခရဈယာနျဓမ်မအတှေးအပျေါ မူတညျပွီး အစဉျပွောငျးလဲလာခဲ့ကွောငျး တှရေ့သညျ။ ထို့အပွငျ ဤပွောငျးလဲမှုထဲတှငျ အကောငျးနှငျ့အဆိုး အမွဲဒှနျတှဲလကျြရှိသညျကို တှရေ့သညျ။ ခရဈယာနျသာသနာသမိုငျးကို သသေခြောခြာ လလေ့ာမှသာလငျြ ဤအခကျြကို သိရှိနိုငျမညျ။ ထို့ကွောငျ့ ခရဈယာနျသာသနာသမိုငျးကို လလေ့ာရနျ လိုအပျပါသညျ။ သမိုငျးကိုလလေ့ာသညျ့ အပွငျ သသေခြောခြာ သုံးသပျရနျလညျး လိုအပျသညျ။ သို့မှသာလငျြ အတိတျမှအမှားမြားကို ရှောငျရှားနိုငျပွီး မကျြမှောကျအသငျးတျော သာသနာအတှကျ မှနျကနျသော သာသနာပွုပုံစံကို ထုတျဖျောနိုငျမညျဖွဈသညျ။ တမနျတျောခတျေအတှငျးခရဈယာနျသာသနာ (ခသ ၃၇-၁၀၀) တမနျတျောခတျေအတှငျး ခရဈယာနျသာသနာကို ယဘေုံယအြားဖွငျ့ နှဈပိုငျးခှဲခွားလို့ ရပါသညျ။ ယုဒခရဈယာနျသာသနာနှငျ့ ဟလေသခရဈယာနျသာသနာတို့ ဖွဈပါသညျ။ ယုဒခရဈယာနျသာသနာအကွောငျးကို နားလညျရနျအတှကျ ပထမဦးစှာ ယရေုရှလငျအသငျးတျောအကွောငျးကို သိရှိဖို့ရနျ လိုအပျသညျ။ ယရေုရှလငျအသငျးတျောသညျ ယရှေု၏တပညျ့တျောမြားနှငျ့ …
Continue reading “ခရဈယာနျသာသနာသမိုငျးအပျေါ ယဘေုံယြ သုံးသပျခကျြ”
(ဆာလံ၊ ၁ဝ၇)၌ “ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ ကရုဏာတော်သည် အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့် ဂုဏ် ကျေးဇူးတော် ကို ချီးမွမ်းကြလော့”ဟု မိန့်တော်မူထားပါသည်။ ထိုစကားတော်သည ဘုရားသခင်၏စကားဖြစ်၍ သက်သေရှိပါသည်။ ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်၍ ကတိတည်သောဘုရားရှင်ဖြစ်ကြောင်း၊ အသက်တာ၌ လက်တွေ့ ခံစားသိရှိထားသောသူများ ယနေ့လောကတွင် အမြောက်အမြားရှိနေကြပါသည်။ ထိုသက်သေကို မိတ်ဆွေ၏အသက်တာ၌ ခံစားရပြီးလား၊ မခံစားရသေးပါက ခံစားနိုင်ဖို့ရန် ယနေ့သခင်ယေရှုကဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါသည်။ ကရုဏာတော် ကရုဏာတော်ဟူသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးပြုမှုဖြစ်သည်။ မထိုကမတန်ဘဲနှင့် ခံစားရရှိသောအရာဖြစ်သည်။ မိမိတို့ လုပ်ဆောင်ကြောင့် ထိုက်တန်စွာခံစားရရှိသောအရာမှာ ကရုဏာတော်မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်က ထာဝရဘုရား သည် ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ ကရုဏာတော်အစဉ်တည်ကြောင်း ပြောဆိုသည့်အခါ ထိုသက်သေကို ခံစားထားသော အခြားသူများက အတူတကွအာမင်ခေါ်၍ ဝန်ခံကြမည်သာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာကျေးဇူးကို ခံစားရမှု အမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်။ အချို့က ကျန်းမာရေး၊ အချို့ကစိတ်ဒုက္ခပြဿနာ၊ အချို့ကစီးပွါးရေး၊ …
Continue reading “ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူရှိတော်မူသော ဘုရား”
“…မိ မိ လူ တို့ ကို အ ပြစ် မှ ကယ် ချွတ် မည့် သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ ယေ ရှု ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည် ဟု ကောင်း ကင် တ မန် ဆို ၏။ ( မဿဲ ၁း၂၁)” ဤ ကျမ်း ပိုဒ် ကို ဖေါ် ပြ ရွတ် ဆို လိုက် သည် နှင့် ယုံ ကြည် သူ အား လုံး ၏ စိတ် တွင် အ …
Continue reading “လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ အ တွက် ခရစ္စမတ် အ ရှင်။”